नेपाललार्इ इतिहास रच्ने सुवर्ण अवसर, माल्दिभ्सलार्इ हराउने यस्तो छ प्लान! – PathivaraOnline
Home > खेलकुद > नेपाललार्इ इतिहास रच्ने सुवर्ण अवसर, माल्दिभ्सलार्इ हराउने यस्तो छ प्लान!
admin September 12, 2018 खेलकुद 0
ढाका । बंगलादेशमा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा नेपालले आन बुधबार माल्दिभ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा ५ औं पटक सेमिफाइनल पुगेको नेपाल माल्दिभ्सलाई पराजित गर्दै फाइनल पुग्ने लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको छ । नेपाल प्रतियोगितामा पहिलोपटक फाइनल पुग्ने प्रयासमा हुने छ। सन् १९९३ देखि सुरु भएको साफ च्याम्पियन्सिपमा नेपाल अहिलेसम्म फाइनल पुग्न सकेको छैन।
यस प्रतियोगिताको इतिहासमा नेपालले मालदिभ्सलाई हराएको छैन। तर यी दुई टोलीबीचको भिडन्त सँधै रोमाञ्‍चक रहँदै आएको छ। त्यसैले यसपटक नेपालले माल्दिभ्ससँग भोग्दै आएको बराबरी र हारको नतिजा जितमा बदल्न सकेन नेपालले इतिहास रच्नेछ ।
१३ फुटबल खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ, सात खेलाडीको रिपोर्ट आउन बाँकी…